Waxa aan qabano - Shenzhen Sunson International Logistics Co., Ltd.
Waxaan u soo bandhignaa macaamiisheenna kuwa ugu wanaagsan ee amarka fulinta eCommerce ee ka socda Shiinaha illaa Worldwide…
Fulintu waxay ku saabsan tahay in ka badan amarrada dhoofinta ee macaamiishaada. Waxay ku saabsan tahay abuurista khibrad iibsi heer koowaad ah oo reebaysa aragti waara, taas oo hubinaysa in macaamiishaadu ay ku soo noqdaan si ay mar labaad iyo mar labaad u dalbadaan. Taasi waa meesha aan ku caawin karno!
Khibrad:Waxaan khibrad u leenahay dejinta habraacyada loo baahan yahay dhammaystirkaaga ugu dambeeya ee tilmaamaha B2B iyo B2C. Waxaan ognahay dhaqamada ugu wanaagsan ee arimahan kaa faaidaysan kara adiga. Waxaan haynaa hanaan hufan oo la dejiyey, qalab, iyo shaqaale si wanaagsan loo tababaray si ay ugu maareeyaan si badbaado leh, wax ku ool ah iyo habka ugu rajada badan. Xarumaheenna waa heerarka ugu sarreeya ee leh dayactirka ugu wanaagsan ee suurtagalka ah ee joogtada ah ee kormeerka barta, ilaalinta tayada iyo ilaalinta. Shaqaalaheena si wanaagsan ayaa loogu tababaray inay ilaaliyaan heerarkaan markasta.
Nidaamka:Waxaan ku siineynaa xal macquul ah oo qiimo jaban oo maskaxda ku haya maareynta waqtiga waxtarka leh. Adiga oo dhisaya howlahayaga iyo adeegyadayada hareeraha meheraddaada, waxaan kaa badbaadin karnaa waqti, lacag iyo wax kasta oo si nabadgelyo leh loo maareeyo oo aan dhib lahayn. Nidaamkeena gudaha waxaa loogu talagalay macaamiisha oo u fudud oo dareen leh markabka tafaariiqda ee internetka, kuu oggolaanaya inaad maareyso tirtirkaaga iyo amarrada fog. Waxaad marwalba kormeeri kartaa kaydkaaga meel kasta, wakhti kasta, si badbaado leh adiga oo aan wax khatar ah u lahayn kormeerid. Sunson wajigiisa websaydhka ku saleysan dhammaadka hore wuxuu gebi ahaanba ku dhexjiraa hawlgalkeenna soo-qaadashada iyo baakadka gadaashiisa dambe. Waxaan u adeegsanaa tikniyoolajiyada barcode marxalad kasta.
Kaydinta:Waxaan haynaa bakhaar ka badan 10,000 sq. Mitir oo ku yaal Shenzhen iyo Guangzhou oo ka tirsan gobolka Guangdong, ee Shiinaha. Alaabooyinka waxaa loo keydiyaa si nidaamsan. Waxaan si hufan u adeegsaneynaa booska bakhaarrada bakhaarka oo gacan ka geysanaya fududeynta maaraynta. Waxyaabaha qaaliga ah si gooni ah ayaa loo hayaa. Bakhaarkeenna sidoo kale waxaa lagu qalabeeyaa nidaamyo dab xakamaynta ah iyo sidoo kale ilaalin 24 saac ah. Waxaan sidoo kale leenahay marin kontarool si loo hubiyo badbaadada alaabadaada.
WAREHOUSES:Bakhaarkayaga ku yaal Shiinaha wuxuu kuu oggolaanayaa inaad ka faa'iideysato qiimaha hawlgalka hooseeya iyo xulashooyinka bixinta badan. Waxaa sidoo kale jiri doona suurtagal faa'iidooyin sida dhimista canshuurta iibka iyo ka fogaanshaha waajibaadka. Waxaan sidoo kale kaa caawin karnaa inaan la xiriirno alaab-qeybiyeyaashaada Shiinaha.
Xullo-iyo-Xidhmo:Waxaan la tacaalnaa 30,000 + amar maalin kasta oo aan awood u leenahay 100,000 + amar inta lagu jiro xilliga ugu sarreeya. Waxaan haysannaa waqti ku soo noqosho aad u dhaqso badan. Guud ahaan, amarrada la soo gudbiyo inta u dhexeysa 10:00 - 20:00 waxay diyaar u yihiin uruurinta rarka markabku 24 saacadood gudahood. Annaga oo ah xul-iyo-baakad waxaan isticmaaleynaa nidaamka ugu horreeya ee ugu horreeya, marka macaamiishaada waxaa loo damaanad qaadayaa in ay ku helaan alaabadooda xaalad ku habboon. Waxaan bixinaa qalab bilaash ah oo buuxiya si aan uga ilaalino waxyeelada inta lagu jiro shixnadaha caalamiga ah. Waxaan u adeegsanaa tikniyoolajiyada barcode marxalad kasta. Xirmooyinka si otomaatig ah ayaa loo miisaamaa si loo hubiyo saxnaanta kharashyada rarka. Xaqiiqdii, tikniyoolajiyaddu waa furaheena yareynta kharashyada, hagaajinta waxtarka iyo yareynta khaladaadka aadanaha.
Shixnad:Xirmooyinka waxaa lagu kala saaraa iyadoo la adeegsanayo mashiinadeena mar walbana waa la labalaabaa ka hor inta aan la dhoofin. Aqoonta aan u leenahay maraakiibta caalamiga ah waxay noo suurta gelinaysaa inaan lacag iyo sidoo kale waqtiba kuu keydinno. Waxaad heli doontaa ikhtiyaarka bixinta dhaqaalaha ugu badan ee la heli karo maxaa yeelay sunson waxay wada-hawlgalayaal la ahaayeen shirkadaha sida tooska ah u hoggaamiya adduunka sida UPS, DHL, EMS, iwm iyo sidoo kale adeegyada boostada caalamiga ah sida Netherlands Post, Hong Kong Post, China Post, USPS, Switzerland Post , Royal Mail, Belgium Post, iwm.Waxaan sidoo kale leenahay adeegyo khadka toosan ah, oo isku xiraya waraaqaha yurubiyanka si ay u daryeelaan gaarsiinta maylkii ugu dambeeyay. Ka faa'iideyso sicirkeenna hoose ee maraakiibta ee aan horay ugala hadalnay raryahannadan lagu kalsoon yahay! Haddii aad ka baxsan tahay Shiinaha oo aad wax ku iibineyso alaabada lagu sameeyay Shiinaha, suuqyada adduunka, markaa waxaan kaa caawin karnaa inaad amarro toos ah uga soo dirto Shiinaha macaamiishaada meel kasta oo adduunka ah.
Macaamiisha:sunson waxay khibrad weyn u leedahay la shaqeynta macaamiisha ajaanibta ah ee wax soo saarkooda laga keeno Shiinaha. Sidaan ognahay, intabadan tafaariiqleyda internetka waa kuwa ajaanib ah; waxaan soo saarnay qaab ganacsi oo u gaar ah kaas oo qaabilaya dhamaan macmiilkeena fog isla markaana u oggolaanaya inay wax walba ku maareeyaan khadka tooska ah. Haddii aad u baahan tahay dhammaystir ay ku dheehan tahay dovetails-ka si aan kala go 'lahayn oo aad dukaanka wax uga iibsanayso e-commerce, markaa waannu kaala hadli karnaa si loo habeeyo hawsha iyada oo loo marayo isdhexgalka API. Waxaan fududeyn doonnaa inaan bakhaarka Shiinaha ka wadno dibedda.
Taageero:Waxaan leenahay Maareeyayaal Xisaabeed ku hadla Afka Ingiriiska; Wakiillada Adeegga Macaamiil ee had iyo jeer loo qoondeeyo macmiil kasta oo diiwaangashan si ay sida ugu macquulsan u siiyaan taageero habeysan.
Adeegyada fulineed ee aad ku guuleysan doontid halkan, sunson waa lala xisaabtami karaa laguna caddeeyey dhammaan ballanqaadyadeena. Waad baabiin kartaa waqtiga aad ku qaadatay howlaha shaqaalaynta, tababarada iyo kormeerka shaqaalaha maraakiibta haddii aad nala soo xiriirto. Adigu in aad adigu sameyso ma sahlana, annagaa halkaan u joogna adiga. Waxaan kuu qabaneynaa adiga, si badbaado leh oo waafaqsan waqtiga. Welwelkaagii waa kaa baxay. Xarunteena fulintu waa waxa aad u baahan tahay si aad ganacsigaaga ugu gaarsiiso heerka ku xiga, mid caalami ah oo rajo leh.
Waxaan kugu dhiirigelinaynaa inaad waddo iibka waxaanan qaban doonnaa xirxirida, rarka adiga. Kaliya waxaad diirada saareysaa waxa ugufiican ee aad sameyso. Adeegyada fulineed ee aad ka heli doontid qorraxdu waa ammaan, la xisaabtan iyo sida ugu fiican ee loo caddeeyey. Waxaad tirtiri doontaa waqtiga aad ku qaadatay shaqaaleynta, tababarka iyo kormeerka shaqaalaha maraakiibta ama aad adigu sameyso sidoo kale waa mid aad u adag. Xarunteena fulintu waa waxaad ubaahantahay inaad ganacsigaaga u gaarsiiso heerka xiga.